Kordhinta ugu ballaaran ee loogu talagalay budada Megestrol acetate | AASraw
/blog/Megestrol acetate/Kordhinta ugu ballaaran ee loogu talagalay budada Megestrol acetate
Posted on 07 / 01 / 2018 by Dr. Patrick Young ku qoray Megestrol acetate. Waxay leedahay 0 Comment.
Wax kasta oo ku saabsan Megestrol acetate budada
Dib u eegista 1.Megestrol (CAS: 595-33-5)
2.How ma shaqeeyaan Megestrol acetate?
3.How waa budada mastar gaasta ugu fiican si loo qaato?
4.Waxaad u baahan tahay taxadar qaas ah Ka hor intaanad qaadan budada minestrolet?
5. Sidee baan u qaataa budada minestrol acetate?
6.Use Megestrol acetate Kalluumeyaal dad gaar ah
7. Maxaan ka ogaanayaa kaydinta iyo ka takhalusidda daawadan?
8.Megestrol Astetate waxyeellooyinka soo raaca
9.Megestrol Acetate Isticmaalida Culayska Culeyska waa in si taxadar leh loo tixgeliyaa
10.Waa maxay macluumaadka ugu muhiimsan ee aan ogaan karo ee ku saabsan mareegta Megestrol Acetate?
11.Waa halkaan ka heli karaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Megestrol Acetate?
Megestrol acetate video budada ah
I.Megestrol budada ah Calaamadaha aasaasiga ah:
Name: Megestrol acetate budada
Nooca Molecular: C19H26O3
Miisaankani waa: 302.41
Dhibcaha Biyaha: 244-246 ° C
1. Megestrol acetatedib u eegista (CAS:595-33-5)
Megestrol acetate budada waa nooca daaweynta hoormoonka. Waxaa sidoo kale loo yaqaan Megace ama Megestrol (595-33-5). Waa nin ka kooban hormoonka hormoonka hormoonka. Progesterone waa mid ka mid ah hormoonada haweenka laakiin ragga ayaa sidoo kale soo saara qadar yar.
Megestrol acetate budada waa daaweyn loogu talogalay kansarrada soo socda kuwaas oo soo noqday ama ka faafay meesha ay bilaabeen.
• Kansarka naasaha
◆ kansarka uur-jiifka
Sidoo kale waa daaweyn cunto xumo. Dhakhtarkaagu waxaa laga yaabaa inuu kuu sheego inaad qaadato haddii aad miisaankaaga ka lumay sababtoo ah kansarka ama daaweyntiisa. Dhakhaatiirtu waxay sidoo kale u adeegsan karaan daaweynta haweenka qaba xanuunka kulul ee kansarka ama daaweyntooda.
2. Sidee Lacagtaa? Megestrol acetateshaqada?
Megestrol acetate waa nooca daaweynta hoormoonka. Hormoonnada waa walxo kiimiko ah oo ay soo saaraan qanjidhada jidhka, kuwaas oo galaya dhiigga waxayna saameyn ku yeelataa unugyada kale. (Tusaale ahaan, testosterone hoormoon samaynta xiniinyaha ayaa masuul ka ah sifooyinka labka ah sida codka oo dhererka iyo timaha jidhka oo kordhay). Isticmaalka daaweynta hoormoonka ee lagu daaweeyo kansarka waxay ku saleysan tahay fiirinta xayiraadaha hormoono gaar ah oo loogu baahan yahay kobaca unugyada waxay ku yaalaan dusha sare ee unugyada kansarka qaarkood. Daaweynta hormoonka waxay u shaqeyneysaa; joojinta wax soo saarka hormoon gaar ah, xannibaya hormoonnada hormoonka hormoonka, ama bedelida walxo khibrad leh oo loogu talagalay hormoonka firfircoon, oo aan loo isticmaali karin unugyada tumo. Noocyada kala duwan ee daaweynta hoormoonka waxaa lagu qoondeeyey shaqadooda iyo / ama nooca hoormoonka la sameeyey.
Megestrol acetate waa a progestin (foomka man-sameeyo ee hormoonka hormoonka hormoonka). Waxay leedahay siyaabaha farageliya wareegga oogada caadiga ah. Tani waxay faragalinaysaa kicinta kobaca unugyada ee unugyada tumidda ee estrogen. Waxaa sidoo kale loo maleynayaa in ay saameyn toos ah ku yeelan karto maqaar darbiinka derbiga ah (endometrium).
Waxyeellada soo gaarta Megestrol acetate waxay ahayd miisaan korodh. Xaqiiqada saxda ah ee saameyntani ma cadda, hase yeeshee saameyntu waxay keenaysaa kororka dufanka jidhka. Ka faa'iideysashada saameyntan, Megestrol acetate ayaa la darsay waxaana loo isticmaalaa daaweynta khasaaraha cunto xumada (anorexia), murqaha maqaarka (cachexia) iyo miisaan lumis oo la xiriira kansarka iyo AIDS.
3. Sidee loo isticmaalaa mareegta ugu wayn ee loo yaqaan 'megestrol acetate acetate'?
Isticmaal dawadan (Megestrol acetate budada) sida uu dhakhtarkaagu farayo. Akhri dhammaan macluumaadka la siiyay. Raac tilmaamaha oo idil.
♦ Si aad u hesho faa'iidada ugu badan, ha maqnaan qiyaasaha.
♦ Isticmaal qaadashada daawadan (Megestrol acetate budada) sida dhakhtarkaaga ama bixiyaha daryeelka caafimaadku kuu sheegay, xitaa haddii aad si fiican u dareento.
♦ Qaado qiyaasta la seegay isla marka aad ka fekerto.
♦ Haddii ay kugu dhowdahay waqtiga qiyaastaada xigta, ka boodi qiyaasta la seegay oo aad dib ugu noqotid wakhtigaaga caadiga ah.
♦ Ha qaadanin daawooyinka 2 isla markaa ama qaadasho dheeraad ah.
4. Waa maxay taxaddarrada gaarka ah Ka hor inta aanad qaadan budada mareegta?
♦ u sheeg dhakhtarkaaga iyo farmashiistahaaga haddii aad xasaasiyad ku leedahay budada mastarro, daawooyinka kale, ama mid kasta oo ka mid ah maaddooyinka aan firfircooneyn ee ku jira maadada mitrastole acetate, ka-joojinta, ama ka-joojinta xoogga leh. Weydiiso dhakhtarkaaga ama farmashiistaha liistada waxyaabaha aan firfircooneyn.
♦ u sheeg dhakhtarkaaga iyo farmashiistaha dawooyinka iyo daawooyinka aan la qorin, fitamiinnada, nafaqada nafaqada, iyo alaabta dhirta ee aad qaadato ama qorsheyso inaad qaadato. U hubso inaad sheegto antibiyootiko iyo indinavir (Crixivan). Dhakhtarkaaga ayaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu wax ka beddelo qiyaasaha daawooyinkaaga ama uu si taxadar leh kuula socodsiiyo waxyeelada.
• u sheeg dhakhtarkaaga haddii aad leedahay ama aad waligaa ku dhicin xinjir dhiig ah meel kasta oo jirka ka mid ah, istaroog, sonkorow, ama kelyo ama cudur beerka ah.
♦ u sheeg dhakhtarkaaga haddii aad uur leedahay, qorshayso inaad uur yeelato, ama aad naas nuujiso. Haddii aad uur yeelato adigoo qaadanaya daawada megestrol acetate, isla markiiba wac dhakhtarkaaga. Mishiinka loo yaqaan 'megestrol acetate' ayaa laga yaabaa inuu waxyeelo uurjiifka. Ha naas nuujin marka aad qaadanayso budada mastarolka.
♦ waa inaad ogaataa in mishiinka loo yaqaan 'megestrol acetate acetate' uu fara galin karo caadada caadada ee caadada haweenka. Hase yeeshee, waa inaadan u qaadan in aadan uur yeelan karin. Isticmaal habka lagu kalsoon yahay ee xakameynta dhalmada si looga hortago uurka.
♦ Haddii aad qalliin ku jirto, oo ay ku jiraan qalliinka ilkaha, inta lagu jiro ama wax yar ka dib daaweyntaada, u sheeg dhakhtarka ama dhakhtarka ilkaha in aad tahay qaadashada megestrol acetatebudada.
Qaado sida uu u qoray takhtarkaaga. Ha ku qaadin qadar yar ama ka yar ama ka dheer inta lagu taliyey. Raac tilmaamaha ku qoran warqadda daawada laguu qoray.
Ku rux afuufaha afka (dareeraha) ka hor intaadan cabbirin qiyaasta. Cabbirta dareeraha qiyaasta qaadashada qiyaasta qaadashada ee koobiga ah ama koobbi daawo, oo aan la qaadin miiska cuntada caadiga ah. Haddii aadan haysan aaladda qiyaasta qiyaasta daawada, weydii farmasigaaga hal mid.
Megace ES wuxuu ku jiraa diirada sare ee maadada megestrol acetate marka loo eego Megace. Haddii dhakhtarkaagu bedelo noocaada, xoogga, ama nooca budada loo yaqaan "megestrol acetate", baahida qiyaasta daawada ayaa laga yaabaa inay isbedesho. Weydii farmashiiyahaaga haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan dawada aad ka hesho farmasiga.
Baahidaada qiyaastaada ayaa isbedeli karta haddii aad qalliin hayso, aad xanuunsan tahay, ama aad qabtid infekshan. Ha baddalin qiyaasta daawadaada ama jadwalka adiga oo aan talo bixin dhaqtarkaaga. Ku kaydi heerkulka qolka fog ee qoyaanka iyo kuleylka.
6. Isticmaal Megestrol acetateKalluumeyaal dad gaar ah
Uurka Qaybta X [fiiri Digniinta iyo Taxaddarrada (5.2)]. Macluumaadka teratolojiyada ku filan oo ku filan ayaa laga heli karaa qiyaasaha daaweyneed ee khuseeya. Jiirarka uurka leh ee lagu daaweeyo qiyaasaha hoose ee Megestrol acetate (0.02-laab ah qiyaasta daaweynta ee lagu taliyey) waxay sababtay dhimista miisaanka uurjiifka iyo tirada dhalashada nool, iyo feminization ee uurjiifka labka ah.
♣ Hooyooyinka xanaaneeya
Sababtoo ah suurtagalnimada waxyeellooyinka xun ee dhalaanka cusub, kalkaalisada waa in la joojiyaa haddii Megestrol loo isticmaalo budada loo baahan yahay.
♣ Isticmaalka Carruurta
Ammaanka iyo waxqabadka bukaanada carruurta ee aan la dhisin.
♣ Isticmaalka Geriatric
Daraasad cilmi baaris ah oo ku saabsan daawada anorexia, cachexia, ama miisaan culus oo aan la ogaan karin ee bukaanka AIDS qaba kuma jiraan tiro ku filan oo bukaan ah oo da'doodu tahay 65 sano iyo ka weyn si loo go'aamiyo in ay si ka duwan uga jawaab celiyaan bukaanada yar yar. Khibradaha kale ee bukaan-socodka ee la soo sheegay ma aysan kala garaneynin faraqyada jawaabaha u dhexeeya waayeelka iyo dadka da'da yar. Guud ahaan, xulashada qiyaasta bukaan-socodka waayeelka waa inay taxaddaraan, badanaa waxay ka bilaabataa dhamaadka hoose ee qiyaasta qiyaasta, taasoo muujinaysa inta badan xajmiga xanuunka, xannuunta, ama wadnaha oo hoos u dhaca, iyo cudurrada laysku daro ama daweynta kale.
Daawada megestrol acetate waxaa loo yaqaanaa in si weyn looga soo baxo kelyaha, iyo khatarta ah ee falceliska sunta ah ee daroogada ayaa laga yaabaa in ay ka weyn tahay bukaanka qaba howlaha kelyaha oo daciif ah. Sababtoo ah bukaanada waayeelka ah waxay u badan tahay inay yeeshaan shaqeyn keli ah, daryeelka waa in lagu qaato xulashada qaadashada, waxaana laga yaabaa inay noqoto mid waxtar leh si loola socdo hawlaha kelyaha.
♣ Isticmaal Haweenka
Megestrol acetate budada ayaa isticmaalkeeda ku xadidan haweenka qaba HIV. Dhammaan dumarka 10 ee tijaabooyinka bukaan socod eegtada ayaa ku warramey dhiigbax weyn. Megestrol acetate budada ah waa derajada progesterone, taas oo keeni karta dhiig-baxa dumarka haweenka.
Daawadan ku hay caagaga ay ku timid, si adag u xir, iyo meel aan carruurtu gaarin. Ku kaydi heerkulka qolka iyo ka fog kuleylka iyo qoyaanka (oo aan ku jirin musqusha).
Daawooyinka aan loo baahneyn waa in lagu tuuraa siyaabo gaar ah si loo hubiyo in xayawaanka, carruurtu, iyo dadka kale ayan ku baabbi'in karin. Si kastaba ha ahaatee, waa inaadan daadin dawadan hoos hoosta musqusha. Taa beddelkeeda, habka ugu wanaagsan ee loo tuuri karo daawadaada waa iyada oo loo marayo barnaamij daawo qaadasho ah. Kala hadal farmashiistahaaga ama la xiriir qaybta qashinka / dib-u-warshadaynta deegaankaaga si aad u baratid barnaamijyada dib-u-qabashada bulshadaada. raadso www.aasraw.com si aad u hesho macluumaad dheeraad ah haddii aadan helin barnaamijka dib-u-celinta.
8. Megestrol acetatesaameynaha kale
Macaamiishu waxay ka kooban tahay kiimikada la yiraahdo hormoonada hormoonka haweenka ee loo yaqaan 'progesterone hormone' oo loo isticmaalo in lagu daweeyo cunto xumo iyo miisaan lumis sababtoo ah cudur, waxaana sidoo kale loo isticmaalaa daaweynta kansarka naasaha iyo kansarka endometrial. Megace waxaa lagu heli karaa foomka guud. Saameynaha guud ee Megace waxaa ka mid ah:
· Miisaanka korodhka
· Isbeddel ku yimaada rabitaanka cuntada
· Calool xanuun
· Finan maqaarka ah
· Hurdo xumo (hurdo la'aan)
· Awooda jinsiga / dareenka oo yaraaday
· Awood la'aan
· Dhibaato haysashada orgaani
Dumarku waxay la kulmi karaan isbeddel caadada caadada, oo ay ku jiraan dhiig-baxa aan la saadaalin karin Ka Joogitaanka Afka Afka waa 800 mg / maalin (20 mL / maalin). Megace waxay la macaamili kartaa insulin ama daawada macaanka ee cudurka macaanka waxayna yarayn kartaa saameynta daawooyinkan, iyo heerka sonkorta dhiigga ayaa kordhi karta. Haddii aad sonkorow qabto, fiirso sonkorta dhiiggaaga oo la hadal dhakhtarkaaga haddii aad aragto isbedelo aan caadi ahayn. Megace waxay la macaamileysaa indinavir, ama insulin ama daawooyinka cudurka macaanka ee afka. U sheeg dhakhtarkaaga oo dhan daawooyinka iyo waxyaabaha aad isticmaashid. Megace waa in aan loo isticmaalin xilliga uurka. Waxay keeni kartaa waxyeelo uurjiifka ah. Dumarka dhalida da'da ah waa inay isticmaalaan kantaroolka dhalashada iyagoo isticmaalaya dawadan. Daawadani waxay u gudbi kartaa caanaha naaska oo waxay yeelan kartaa saameyn aan loo baahnayn oo ku saabsan ilmo xanaaneeyn. Naasnuujinta laguma taliyo inta aad isticmaalayso daroogada.
Saameynkeena Megace (megestrol acetate, USP) Sidee wax u qabtaa daawooyinkaan daaweyntan?
9. Megestrol Acetate Isticmaalida Culeyska Culeyska waa in si taxadar leh loo tixgeliyaa
Megestrol acetate (595-33-5) waa wakiil progestational oo saameyn xooggan ku leh rabitaanka cuntada. Markii hore waxaa loo isticmaalay sidii loo ilaalin lahaa ka hortaga uurka; Si kastaba ha noqotee, saameynta guud ee miisaanka kororka miisaankeedu wuxuu u horseeday isticmaalka hadda sida wakiilka orexigenic. Maamulka MA wuxuu kordhiyaa miisaanka cuntada iyo culeyska jirka ee bukaanada qaba HIV-la-xiriirka iyo kuwa qaba kansarka. MA waa hadda Maamulka Cuntada iyo Maandooriyaha (FDA) ee loo ogolaaday HIV-ku xiran miisaanka luminta. Intaa waxaa dheer, labadaba caafimaadka, bulshada deganayaasha ah iyo dadka waayeelka ah ee ku nool xarumaha daryeelka muddada dheer, isticmaalka MA waxay natiijooyinka kor u qaadeysaa miisaanka jirka. Isticmaalka walxaha orexigenic sida MA ee goobahaas ayaa ku habboon sababtoo ah miisaanka khasaaro la'aanta ayaa lala xiriiriyay dhimashada kordhay. Xaqiiqdii, MA waxay saameyn weyn ku leedahay miisaanka jidhka iyo rabitaanka cuntada oo ka badan walxaha kale ee asexigenka sida dronabinol iyo eicospentaenoic acid. Si kastaba ha noqotee, dadka waayeelka ah iyo bukaanka qaba kansarka ama kelyaha oo aan shaqaynin, baruurta ayaa ah maamulaha ama keli keli ah ee miisaanka korodhka, oo leh wax yar oo ka mid ah muruqyada qalfoofka ama qaybaha kale ee tiro badan oo dufan la'aan ah. Ka mid ah saameynaha badan ee isticmaalka MA, baqshiinka testosterone iyo wax soo saarka estrogen waa mid caan ah. Ka hor intaan la isticmaalin daaweyn kale oo waxtar leh oo dheellitiran oo dheellitiran (flutamide, bicalutamide) ee ragga qaba kansarka qanjirka 'prostate', MA ayaa caadi ahaan loo isticmaalaa goobtan. Xaqiiqdii, ragga da'da weyn, isticmaalka MA waxay u keentaa heerarka ugu dhow ee baaritaanka testosterone. MA ayaa sidoo kale loo isticmaalay in lagu cadaadiyo heerarka estrogen ee haweenka qaba kansarka naasaha.
Daraasaddan lagu daabacay bishaan JCEM waxay baaris ku samaysay saameynta iskudhafka ah ee testosterone iyo MA oo ku saabsan isugeynta miisaanka kor loogu qaaday bukaanka qaba HIV-la xariirta. Daraasadani waxay mar kale muujineysaa, mar labaad, MA wuxuu leeyahay saameyn wax ku ool ah oo ku saabsan rabitaanka cuntada iyo miisaanka jidhka, oo leh baruur qaadashada qaybta aasaasiga ah ee kordhinta miisaanka jirka. Si kastaba ha ahaatee, tiro badan oo dufan la'aan ah ayaa sidoo kale la kordhiyay oo ay weheliso culeyska jirka ee tijaabadan, oo la mid ah baaritaan hore oo saameyn ku yeelatay MA oo ku saabsan miisaanka koritaanka ee bukaanka qaba miisaanka HIV-la xiriiriyay miisaanka. Mulligan iyo al.show in testosterone la joojiyay, iyo beddelka testosterone wax saameyn ah kuma yeeshay halabuurka miisaanka; Intaas waxaa dheer, MA MAAMUL waxay keentay dhimashada libido. Saameyntan saameyneysa MA ee ku saabsan wax soo saarka testosterone iyo in la xakameeyo saameynta testosterone on cufnaanta cufnaanta jirka waa in si taxadar leh loo tixgeliyaa kahor intaan isticmaalin MA ee bukaankan. Dhibaatada ka jirta bukaanka qaba cudurka HIV ayaa si aad ah loola xiriiriyaa heerarka hooseeya iyo kuwa hooseeya.
Qaar ka mid ah su'aalaha aan la haynin ee ku saabsan saameynta MA ayaa weli taagan. Isticmaalka waa in si taxadar leh loo tixgeliyaa oo si taxaddar leh loo maareeyo Haddii ay ka soo rayneyso rabitaanka cuntada iyo faa'iidada dufanka badani waa ujeedooyinka la jecelyahay ee maaraynta cachexia ama miisaan culus oo khasab ah, MA ayaa weli ah mid ka mid ah wakiillada ugu awoodda badan ee orexigenka ee hadda la heli karo. Isticmaalka waa in la miisaamaa suurtagalnimada xakameynta adrenal iyo xakameynta wax soo saarka iyo xajmiga. Sababtoo ah hantida antiandrogen, saameynaha antianabolic ee MA ma ahan mid laga gooyey maamulka testosterone.
10. Maxay tahay macluumaadka ugu muhiimsan ee aan ogahay ee ku saabsan Megestrol Acetatebudada?
Duufaanka Megestrol wuxuu ka dhalin karaa ilmo aan dhalan ama keena cillado dhalasho. Ha isticmaalin megestrol haddii aad uur leedahay.
Ka hor inta aadan qaadan daawada megestrol acetate, u sheeg dhakhtarkaaga haddii aad qabto sonkorowga ama taariikhda istaroogga ama xinjirowga dhiigga.
Baahidaada qiyaastaada ayaa isbedeli karta haddii aad qalliin hayso, aad xanuunsan tahay, ama aad qabtid infekshan. Ha baddalin qiyaasta daawadaada ama jadwalka adiga oo aan talo bixin dhaqtarkaaga.
Megace ES wuxuu ku jiraa diirada sare ee maadada megestrol acetate marka loo eego Megace. Weydii farmashiiyahaaga haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan dawada aad ka hesho farmasiga.
11. Halkeen ka heli karaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Megestrol Acetate?
♣ Brand: Megace®, Megace® ES
Tags: iibso Megestrol acetate budada, Megestrol acetate budada
Sidee Muun 4-DHEA U Noqon Doonaa Testosterone? Daroogada tijaabada ah J147 (1146963-51-0) Alzheimer's Aging